ကပ်ပတိနျ ဂကျြစပဲရိုး ခေါငျးပျေါက မွနျမာ့ငါးပွားစေ့ အကွောငျး – KK Daily News
ကပ်ပတိနျ ဂကျြစပဲရိုး ခေါငျးပျေါက မွနျမာ့ငါးပွားစေ့ အကွောငျး
Pirate of the Carribean ဇာတျကားတှထေဲက ဇာတျလိုကျကြျော ပငျလယျဓားပွကွီး ကပ်ပတိနျဂကျြစပဲရိုးCaptain Jack Sparrow (Jonny Deep) နဖူးပျေါမှာ တှဲလောငျးဆှဲထားတဲ့ သူ့ရဲ့အဆောငျလေးကို မိတျဆှတေို့ သတိထားမိမှာပါ။
အဲ့သညျ့အဆောငျလေးမှာ ပစ်စညျး ၈ မြိုးပါတဲ့အတှကျ Sparrow’s piece of eight လို့ချေါပါတယျ။ ဒင်ျဂါးလေးတဈပွားပါပွီး ပုတီးစိလေးတှေ သီထားပါတယျ။ Jack ပထမဆုံး ဓါးမွတိုကျခဲ့တဲ့ ပွငျသဈသင်ျဘောက ရရှိတာဖွဈပွီးဒင်ျဂါးလေးကို ကံကောငျးစတေဲ့အဆောငျအဖွဈJack က သူ့နဖူးခေါငျးစီးမှာ အမွတျတနိုး ဆှဲထားပါသတဲ့။ဒါမရှိရငျ Jack Sparrow ဘုနျးနိမျ့မယျဆိုတာ သိတဲ့ သူ့ရနျသူတှဟော အဲ့ဒီအဆောငျလေးကို မရမက လိုကျလုပါတယျ။
Captain Jolly Roger ဆိုရငျ လောငျးကစားလုပျပွီး လုဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမရခဲ့ပါဘူး။ နောကျဆုံးတော့ At World’s End ထဲမှာ Jack ရဲ့ အဆောငျလေးကို Hector Barbossa ဖွတျထုတျလိုကျတာကွောငျ့Jack ကံဆိုးသှားပွီးရဘေဝဲကွီး ခံတှငျးထဲကို သကျဆငျးသှားရပါတော့တယျ။ ဒါက piece of eight အကွောငျးပါ။
စကားမစပျ! မိတျဆှတေို့ သတိထားမိပါသလား
သခြောကွညျ့ကွညျ့ပါအဲ့သညျ့ ဒင်ျဂါးလေးဟာ ၁၉၆၂ ခုနှဈထုတျ မွနျမာငှေ ငါးပွား ဖွဈနပေါတယျခငျဗြာ။ ကြှနျတျောလညျး တလောက HD ကွညျ့မိမှ သတိထားမိတာပါဒါနဲ့ internet မှာရှာကွညျ့ပါတယျ။ Disney က ဘာပွောထားသလဲဆိုတော့ဒင်ျဂါးလေးက ထိုငျးက ရှေးဟောငျး ဒင်ျဂါးလေးဖွဈပွီး ပုတီးစိလေးတှကေတော့ မျောရိုကိုကဖွဈပါတယျတဲ့။
ကြှနျတျောလညျး တတျစှမျးသမြှ ယိုးဒယားဒင်ျဂါးတှေ ရှာကွညျ့ပါတယျပုံစံတူလုံးဝ မရှိပါခငျဗြာ။ သူတို့ ပိုကျဆံတှမှော ထိုငျးဘုရငျပုံနဲ့ စတေီပုထိုးပုံတှသော သှနျးလောငျးပါတယျကသေရာဇာ ခွင်ျသပေုံ့ မရှိပါဘူးသခြောတိုကျကွညျ့ပါ။ ဒါ ၁၉၆၂ ထုတျ မွနျမာ့ပိုကျဆံ ငါးပွားသာဖွဈပါတယျ။
ရေးသားသူ (မိုးဆကျ) Crd
Pirate of the Carribean ဇာတ်ကားတွေထဲက ဇာတ်လိုက်ကျော် ပင်လယ်ဓားပြကြီး ကပ္ပတိန်ဂျက်စပဲရိုးCaptain Jack Sparrow (Jonny Deep) နဖူးပေါ်မှာ တွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့ သူ့ရဲ့အဆောင်လေးကို မိတ်ဆွေတို့ သတိထားမိမှာပါ။
အဲ့သည့်အဆောင်လေးမှာ ပစ္စည်း ၈ မျိုးပါတဲ့အတွက် Jack Sparrow’s piece of eight လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒင်္ဂါးလေးတစ်ပြားပါပြီး ပုတီးစိလေးတွေ သီထားပါတယ်။ Jack ပထမဆုံး ဓါးမြတိုက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်သင်္ဘောက ရရှိတာဖြစ်ပြီးဒင်္ဂါးလေးကို ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်အဖြစ်Jack က သူ့နဖူးခေါင်းစီးမှာ အမြတ်တနိုး ဆွဲထားပါသတဲ့။ဒါမရှိရင် Jack Sparrow ဘုန်းနိမ့်မယ်ဆိုတာ သိတဲ့ သူ့ရန်သူတွေဟာ အဲ့ဒီအဆောင်လေးကို မရမက လိုက်လုပါတယ်။
Captain Jolly Roger ဆိုရင် လောင်းကစားလုပ်ပြီး လုဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ At World’s End ထဲမှာ Jack ရဲ့ အဆောင်လေးကို Hector Barbossa ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်Jack ကံဆိုးသွားပြီးရေဘဝဲကြီး ခံတွင်းထဲကို သက်ဆင်းသွားရပါတော့တယ်။ ဒါက piece of eight အကြောင်းပါ။
စကားမစပ်!!! မိတ်ဆွေတို့ သတိထားမိပါသလား
အဲ့သည့် ဒင်္ဂါးလေးဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထုတ် မြန်မာငွေ ငါးပြား ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း တလောက HD ကြည့်မိမှ သတိထားမိတာပါဒါနဲ့ internet မှာရှာကြည့်ပါတယ်။ Disney က ဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ဒင်္ဂါးလေးက ထိုင်းက ရှေးဟောင်း ဒင်္ဂါးလေးဖြစ်ပြီး ပုတီးစိလေးတွေကတော့ မော်ရိုကိုကဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်လည်း တတ်စွမ်းသမျှ ယိုးဒယားဒင်္ဂါးတွေ ရှာကြည့်ပါတယ်ပုံစံတူလုံးဝ မရှိပါခင်ဗျာ။ သူတို့ ပိုက်ဆံတွေမှာ ထိုင်းဘုရင်ပုံနဲ့ စေတီပုထိုးပုံတွေသာ သွန်းလောင်းပါတယ်ကေသရာဇာ ခြင်္သေ့ပုံ မရှိပါဘူးသေချာတိုက်ကြည့်ပါ။ ဒါ ၁၉၆၂ ထုတ် မြန်မာ့ပိုက်ဆံ ငါးပြားသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကျော် Captain Jack Sparrow ဟာမြန်မာ့ငါးပြားကို တရိုတသေ ချိတ်ဆွဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာ့ငါးပြားမရှိတော့တဲ့အတွက် သူကံဆိုးသွားရတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရင်း ငါးပြားရှင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် အနေနဲ့သင်လည်း ဂုဏ်ယူနိုင်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ (မိုးဆက်) Crd
အံဩလောကျအောငျ တိုကျဆိုငျလှနျးနတေဲ့ မွငျရခဲတဲ့ ပုံရိပျမြား (၂၇)ပုံ
အလှဲကွီး လှဲနတေဲ့ ဖွဈရပျမြားကိုရိုကျကူးမိထား‌သော ဟာသဆနျဆနျဓာတျ‌လေးမြား(၂၇)ပုံ